Vitsy ny zavatra mety hahasosotra kokoa noho ny mamolavola modely HTML mailaka na miasa amin'ny mpanamboatra modely an'ny antoko fahatelo. Alao sary an-tsaina ny fahafahanao mandahatra, mamolavola, manamboatra indray ary manaingo ny maodelin'ny mailakao manokana… tsy misy kaody HTML na fahaizana mandrafitra tranonkala. Izany indrindra no noforonin'i dotMailer tamin'ny EasyEditor. Endri-javatra amin'ny dotMailer's EasyEditor: manafatra haingana ny sarinao ary mamorona tranomboky - Mijanona ho voalamina miaraka amin'ny sary fampielezan-kevitra rehetra amin'ny toerana iray. Fandefasana hafatra amin'ny fampielezan-kevitra